အိပ်ယာမ၀င်ခင် ရေချိုးလျှင် ရရှိမည့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ | MM Cities
HomeBlogsMMcities's blogအိပ်ယာမ၀င်ခင် ရေချိုးလျှင် ရရှိမည့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
Health & Beauty Aug 3,2016 1030MMcities
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည့်အတိုင်းပဲ အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လူ့သက်တမ်း သုံးပုံတစ်ပုံကို အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်သာ ကုန်ခမ်းစေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့အတွက် မွေ့ယာကောင်းကောင်းနှင့် ခေါင်းအုံးကောင်းကောင်း လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်မှာထိုအရာများရှိပြီဆိုလျှင် မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အိပ်စက်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်တော့အခါမှ မှောက်မအိပ်ပါနှင့်။ သင့်အိပ်ယာခင်းကို ပုံမှန်လဲပေးပါ။ ည အိပ်ခါနီး ရေချိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ကြပါသည်။ ညအိပ်ခါနီး ရေချိုးခြင်းသည် အမှန်တကယ်ကောင်းပါသည်။
(၁) ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြေလျော့စေခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်ဖြေလျော့ခြင်းသည် သင် ညအိပ်ယာမ၀င်ခင်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
(၂) ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ပုံမှန်အတိုင်း နှေးကွေးစေခြင်း
သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်၏ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှုနှုန်းနှင့် အခြားအစာချေဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် နှေးသွားပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ် အိပ်စက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။
(၃) ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် အရာများကို လျော့နည်းစေနိုင်ခြင်း
သင်သည် မကြာခဏ ဓါတ်မတည့်၍ ယားယံတတ်သူဖြစ်ပါလျှင် ညနေခင်းတိုင်း ရေပုံမှန် ချိုးပေးပါ။
(၄) စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချခြင်း
သင် စိတ်ဆိုးနေချိန် (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် များပြားနေလျှင် အိပ်ယာကို ဘယ်တော့မှ တန်းမ၀င်ပါနှင့်။ ရေချိုးလိုက်ခြင်းက ထိုကဲ့သို့ အရာများကို ပြေလျော့စေပါသည်။
သင်က ညအိပ်ခါနီး ရေချိုးထားသည့်အတွက် မနက်ကျလျှင် ရေမချိုးဘဲ အလုပ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ချိန်ပိုရပါသည်။
(၆) ဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
ညအိပ်ခါနီး ရေချိုးခြင်းသည် ဆဲလ်အသေများနှင့် ဖုန်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရေပြားအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
(၇) အိပ်ယာခင်းကို သန့်စင်စေခြင်း
အိပ်ယာခင်းသည် ညအခါတွင် များစွာသော အမှုန်အမွှားများကို ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေမချိုးထားလျှင် အရေပြားမှာ ရှိသော ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွှားများနှင့် အိပ်ယာခင်းကို ထိစေပြီး အိပ်ယာခင်းကို ပို၍ ညစ်ပတ်စေပါသည်။
ကြွက်တတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို လျော့နည်းစေခြင်း၊
ရေချိုးပြီးလျှင် ခေါင်းကို ခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ခေါင်းရေစိုနှင့် အိပ်ယာထဲ ဘယ်တော့မှ မ၀င်ပါနှင့်။ ခေါင်းရေစိုနှင့် အိပ်ယာဝင်မိပါက သင်အအေးမိပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ Hair Dryer နှင့် အခြောက်ခံပြီး ဆံပင်အရမ်းပူနေသည့်အချိန် အိပ်ယာမ၀င်ပါနှင့်။
ရေအေးချိုးခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်ကို လှုံဆောင်ပေးခြင်း၊ လူကို တတ်ကြွလန်းဆန်းစေခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို တွန်းလှန်သော ဟော်မုန်းဓါတ်များ ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးခြင်း၊ သင်၏ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို လျင်မြန်စေခြင်း၊ သင်၏စိတ်ကို ပေါ့ပါးစေခြင်း၊ အရေပြားကို တင်းရင်းစေခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ လျော့နည်းစေခြင်း။
ရေနွေးချိုးခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာခြင်း၊ ယောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ နှာစီးခြင်းကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ဖျက်ပေးခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကျယ်စေပြီး အရေပြားကို သန့်ရှင်းစေခြင်း။
Health Benefits of Showering Before Bed
We all know that sleeping is very important for our health.
When you remember the fact that we spend nearly third of our lives sleeping, you want to do everything possible that your sleep is all that it should be.
If you want to sleep well, you must haveagood mattress and pillow.
When you have that, you must chooseagood sleeping position.
Never sleep on your chest, and always choose sleeping on your back or on your side.
The air in your room has to be ventilated so you breathe fresh air while you are sleeping.
Change your sheets often and make sure that your room has no light in it.
Proper routine before bed will ensue that you fall asleep faster and that you get quality sleep.
Now we come to the interesting part: showering before sleeping and its health benefits.
1.Relaxes the body
This is probably the most important thing you can do before you go to bed.
Everyone knows that you have to be relaxed to fall asleep, and showering can beagreat way to accomplish that.
2.Slows your body down
Since you are relaxed, your heart rate, your breathing and your metabolism are significantly reduced which means that your body has prepared itself for sleeping.
3.Reduces allergy symptoms
If you suffer from allergies, it is best that you takeashower in the evening.
Since your sheets will be clean, and your body will not have any dust, pollen or dirt particles, your allergy symptoms will be significantly reduced.
You don’t want to go to bed angry or full of worries about your job or love life.
Showering will help you forget your problems, even foralittle while.
5.More time to sleep
If you takeashower in the evening, you will have more time to sleep in the morning.
Just remember how many times you wished for another 15 minutes in your bed when your alarmed went on.
6.Removes dead skin cells
If you takeashower before you go to bed, you are not only removing dirt, but you are also removing dead skins cells.
Those cells would otherwise end up in your sheets.
Your sheets collectavery large number of particles during the night.
You are constantly turning while you are sleeping and you body is getting rid of dead skin cells. Combination of dead skin cells, dust, bacteria and other particles makes your sheets very dirty very quickly. If you go to bed and you didn’t tookashower, you are transferring all the dirt from your body to your sheets.
If you decide you want to takeashower before you go to bed, than make sure that you dry your hair properly, and don’t go to sleep while your hair is still wet.
This can beaperfect way of getting cold or flu.
Dry your hair very well, and don’t go to bet while your hair is too hot.
You won’t be able to sleep if your hair and head are still hot from blow drying your hair.
အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် တွေ့ဆုံမည်